ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၃)
ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၃)
အရှင်ကုမာရ (http://www.ashinkumara.com) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
အဲဒါဟာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်လို အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ပဲ။
ခေတ်အဆက်ဆက် မှာလဲ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ခုထက် ထိတော့ အောင်မြင်သေးဘူး။
လူထွက်လိုက်ရင် သုံးစား မရအောင် လုပ်ထားခဲ့တာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က စခဲ့တာပါ။
မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်မှာ ရှင်ဘုရင်က နေ နွားကျောင်းသားအဆုံး ဘုန်းကြီးလူထွက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်ပဲ။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့စည်းတွင်း.. မိန်းကလေးများဟာ လည်း အဲဒီ ဘုန်းကြီးလူထွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်ကို ကြင်ယာအဖြစ်ရွေးခဲ့ရတာ။
.ဘာသာစုံ သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်သော ဗုဒ္ဓသာသနာ့ တက္ကသိုလ်ကြီးပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရင်...
သင်လာတတ်လာ သမျှ ပညာရပ်များကို လူထွက်လိုက်ရင်..(မြန်မာပြည် ၌သာ) ရေးတတ်ဖတ် တတ် အဆင့်သို့ နှိပ်ချပစ်လိုက်တဲ့ ကျွန် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လျော့နည်းပပျောက်သွားကြမယ်..ဆိုရင်..
... တို့ခေတ်မှာ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အခြေနေပေးရင်..ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:20 AM
ကမ်းစပ်သို့ ...အတွေး တောင်ပံခတ်သံ (သို့ ) ညီလေးဖိ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဂျပန်နိုင...
ဘုန်းဘုန်း အရှင်တိက္ခဉာဏလင်္ကာရ (ယောအသင်း) အတွက် မွေး...
သူတို့ တွေနဲ့ မတူချင်
နှစ်သက်မိသော ဇင် ပုံပြင်များ (၁၇)
ကျွန်တော့်အတွက် အမေ ဘာများထားခဲ့ပါလိမ့် (အပိုင်း ၃)
ကျွန်တော့်အတွက် အမေ ဘာများထားခဲ့ပါလိမ့် (အပိုင်း ၂)
ကျွန်တော့်အတွက် အမေ ဘာများထားခဲ့ပါလိမ့်